Thailand: Red Tape Guillotine | Thailand travel news
Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Other • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Thailand: Guillotine mena
Tetikasa Guillotine: Sary miaraka amin'i Greg Watkins avy amin'ny BCCT (ankavanana faran'izay) dia ny filohan'ny TCC / BoT Kalin Sarasin (havia faha-5), ny talen'ny BCCT Andrew McBean (faha-2 ankavanana), ny filankevitra amerikanina amerikana (AMCHAM Thailand) filoham-pirenena Greg Wong 4 ankavanana), Tale Mpanatanteraka AMCHAM Heidi Gallant (ankavia faha-3), filoham-pirenena Australian-Thai Chambre of Commerce (AustCham Thailand) filoham-pirenena Benjamin Krieg (ankavanana faha-5) ary Tale mpanatanteraka AustCham Brendan Cunningham (ankavia indrindra)
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Thailand: Guillotine mena
Ny Foreign Chambers Alliance (FCA) dia nanatontosa ny fivoriana fanao isan-taona miaraka amin'ny Chambre du Commerce Thai (TCC) / Board of Trade (BoT) any Thailand.
The Antenimieran'ny varotra anglisy Thailand (BCCT) dia mitarika ny tetik'asa Reguler Guillotine, izay hanao raharaham-barotra ao Thailand mora kokoa.
Ny Tetikasa Guillotine dia fomba iray haingana handinihana ireo lalàna sy fitsipika ary hamafana ireo lalàna sy fitsipika tsy ilaina na tsy ilaina na fanitsiana azy ireo. Ny Tetikasa dia tantanana eo ambanin'ny biraon'ny Dr. Dr. Kobsak Pootrakool, minisitry ny biraon'ny praiminisitra. Ny Guillotine mifehy, antsoina ankehitriny hoe "Fahazoan-dàlana tsotra sy mazava" (sslicense), dia tohanan'ny governemanta Thai tanteraka.
David Lyman, naneho hevitra tamin'ny herintaona dia nilaza hoe: "Tapitra lava ny kasety mena eto amin'ity firenena ity, mitohy hatrany izany," hoy izy. Lyman dia mpisolovava amerikana ary filohan'ny American Chamber of Commerce tany Thailand. Eny tokoa, ny tetik'asa dia teo amin'ny mpandoro lamosina tao anatin'ny 2 taona lasa.
Ny Foreign Chambers Alliance dia misolo tena ny orinasa maherin'ny 2,000 sy mpiasa iray tapitrisa eo ho eo ao Thailand. Andriamatoa Greg Watkins Tale Mpanatanteraka BCCT dia nizara, "Ny efitranonay efatra (UK, USA, Aostralia ary Alemana) dia matetika no mandray anjara toerana amin'ny fisolo vava amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo fikambanana lehibe sy sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, momba ny olana momba ny fanaovana raharaham-barotra any Thailandy mba hisolo tena ny mpikambana ao amintsika. 'tombontsoa, ​​"hoy izy.
Tany Thailand, tamin'ny 2014, fanonganam-panjakana notarihin'ny lehiben'ny tafika, ny jeneraly Prayuth Chan-ocha dia nitarika 3 taona taty aoriana, ny volana aprily 2017, ho amin'ny lalàm-panorenana vaovao iray natsangana ary enim-bolana taty aoriana dia nisy paikadim-pirenena 20 taona napetraka anisan'izany ny lalàna mifehy Tetikasa Guillotine dia natomboka ho komity mpanampy.
Ny ankamaroan'ny fanapahana sisa dia mbola hatao, ny tetik'asa guillotine dia natomboka teo ambany fitantanan'i Dr. Kobsak Pootrakool, filoha lefitra mpanatanteraka Bangkok Bank teo aloha, manana fiaviany ao amin'ny Bank of Thailand sy ny Stock Exchange of Thailand. Ny kaomiseran'ny Kobsak dia notendrena tamin'ny fanombanana ny fahazoan-dàlana an'arivony sy fomba efa niangona nandritra ny am-polony taona maro, naka famantarana avy amin'ireo tetikasa mahomby toa izany tany amin'ny firenena toa an'i Korea Atsimo.
Ny ekipa dia "nandinika ny lalàna sy ny lalàna misy mba hahitana raha tokony hofoanana izy ireo, ovaina, atambatra na avela irery", hoy i Deunden Nikomborirak avy ao amin'ny Thailand Development Research Institute (TDRI), toeram-pandinihana hajaina izay nanampy tamin'ny fampivoarana ny harinkarenan'ilay firenena tao amin'ny 1980s ary nilalao anjara asan'ny mpisava lalana tamin'ny programa guillotine. Nofaritany ireo tolo-kevitra taorian'ny fanombanana fa "C efatra - tapaka, manova, mitambatra na mitohy."
Fikambanana maro hafa koa no nandray anjara tamin'izany. Ny Biraon'ny Fampiasam-bola sy ny Bank of Thailand, izay tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nandalo programa guillotine fahombiazana ho azy, dia nanao fanomezana lehibe. Mpilalao sehatra tsy miankina lehibe dia ny Federasionan'ny Indostria Thai, ny Antenimieran'ny Varotra Thai, ny Fikambanan'ny Banky Thai ary ny Antenimieran'ny varotra ivelany.
Ny Nikkei Asia dia nitatitra tato ho ato fa ny ezaka fanavaozana dia nanohana ny governemanta Prayuth, nandinika tamina fahombiazana ireo olana maherin'ny arivo izay efa novolavolain'ny vondrona guillotine 50 pax.
Ny sehatra tsy miankina any ivelany sy any Thailandy dia mihevitra ny visa, ny takiana amin'ny tatitry ny fifindra-monina ary ny fahazoan-dàlana hiasa ho lalàna maika indrindra mila fanavaozana.
Ohatra iray amin'ny fomba hitazomana ireo lalàna efa lany daty hiasa hiteraka fikorontanan-tsaina, naseho vao haingana nataon'ny Birao fifindra-monina izay nampirehitra afo mirehitra tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny fampiharana tampoka ny sekta natory tao amin'ny lalàna momba ny fifindra-monina 1979, mitaky ny tompon-trano hametraka takelaka TM30 hitaterana ny fisian'ny vahiny mpanofa trano ao anatin'ny 24 ora taorian'ny nahatongavany. Ny fahasimbana vokatr'izany sy ny fihemorana dia nahamenatra izaitsizy ny governemanta Prayuth.